Wafti isku jira QM iyo midawga Yurub maanta Garoowe yimid, lana kumay M/weyne Faroole – Radio Daljir
Wafti isku jira QM iyo midawga Yurub maanta Garoowe yimid, lana kumay M/weyne Faroole
Nofeembar 19, 2012 11:45 b 0
Garowe, Nov 19 – Waxaa maanta oo (Isniin ah) magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland yimid wafuud caalami ka kala socotay golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay iyo waddamada midawga reer Yurub.
Wafuuddaan oo ku soo kala degay labo diyaaradood, waxaa hoggaaminayey ku-xigeenka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ergayga lagu magacaabo Mr. Yury Fedotov, waxaana weheliyey safiirrada dhawr waddan oo Yurub ah u qaabilsan Soomaaliya sida Finland, Holland, Britain, France, Norway iyo saraakiil sarsare oo ka socotay hay?adaha qaabilsan la dagaallanka burcadda.
Socdaalka wufuuddaan, ayaa salka ku hayay sidii deegaannada Puntland looga hirgalin lahaa mashaariic hormarineed oo ay ugu horreeyaan dhisidda xabsi weyn oo lagu hayo dadka lugu qabto falalka burcad-badeednimada, iyadoo sidoo kalena Puntland laga hirgalinayo ciidamo asluubeed oo u tababaran hannaanka lagu dhawro xaquuqda maxaabiista iyo hab-dhaqanka gaar ahaaneed ee loola tacaamulo.
Mas?uuliyiintaan sarsare ee ka socday QM iyo midawga Yurub, waxaa garoonka diyaarahaha magaalada Garowe ku soo dhaweeyey m/weyne kuxigeenka iyo xubno kala duwan oo iskugu jira golayaasha xukuumadda iyo baarlamaanka, halka m/weynuhuna uu ku qaabilay aqalka madaxtooyada Puntland.
Kulankaasi madaxtooyada ka dhacay, madaxda waftigaas iyo m/weynaha Puntland Dr. Faroole, waxay kaga wada-hadleen arrimo badan oo ay ugu miisaan cuslayd macnahoodii safar iyo sida Puntland ay uga go?an tahay taabbo-galinta qorshaha mashaariiceed ee ay wadaan midawga Yurub iyo QM, sidaasna waxaa Radio Daljir xaqiijiyey saraakiil madaxtooyo ah.
Waftigaasi Intii ay ku sugnaayeen Puntland, waxay dhagax-dhigeen dhime weyn oo noqon doona Xabsi lagu aruuriyo dadka gala dambiyada burcad-badeednimada, iyagoo sidoo kalena goob-joog ka ahaa daah-furka tababar loo samaynayey cutubyo ka tirsan ciidanka askuubta Puntland, deegaan cusub oo loo sameeyey isla ciidankaas, kuwaasi oo loo sii carbinayo gacan ku haynta burcad-badeedda lagu soo xiri doona Jeelka dhismihiisa hadda la dhagax-dhigay.
Muashruucaan maanta taabbo-galintiisa laga bilaabay Puntland, ayaa ah mid muddo la dhawrayey, horayna ay u ballan-qaadeen waddamada ku jira ururka midawga Yurub, kaasoo dhinac socday qorshayaashii dunidu ugu talagaleen dabar-goynta burcad-badeednimada, qodobada horena kaga jiray nuxurradii ka soo baxay shirar badan oo ka dhacay meelo kala duwan, loogan hadlayey la-dagaallanka burcad-badeedda.
Caawa iyo Daljir_Isniin Nov 19-2012, Khadar Cawl Ismaaciil_Daljir Buuhoodle
Safaaradda Soomaaliya ee Kenya oo ka hadashay dhibta ku dhacday Somaalida kuna baaqday in la is dejiyo, (Dhegayso)